इटहरीमा पढाउन आएकी स्विजरल्यान्डकि शिक्षिका भन्छिनः बच्चालाई स्वतन्त्र खेल्न दिनुपर्छ
इटहरीः इटहरी २० तरहराको किड्स ह्याप्पी होममा एक महिना पढाउन आएकी स्विजरल्यान्डकि अवकाश प्राप्त शिक्षिका फ्रान्जिस्का जुरफ्लुले बच्चाहरूलाई अधिकांश समय खेल्न दिनुपर्ने बताइन ।
इटहरीमा बुधवार नेपाली र स्विज शिक्षा प्रणालीको बारेमा बोल्दै फ्रान्जिस्काले नेपाल र स्विजरल्यान्डको शिक्षण विधि नै फरक भएको बताइन । नेपालमा अभ्यास कम तर सिद्धान्त धेरै पढाइने तर स्विजरल्यान्डमा भने ठिक विपरीत भएको उनले बताइन ।
स्विजरल्यान्ड सरकारको विभिन्न अवकाशप्राप्त विज्ञहरूलाई विदेशमा अनुभव बाँड्न पढाउने स्विस कन्ट्याक्ट्को कार्यक्रम सिनियर एक्स्पर्ट क्रप्स् (एसइसी)मा जोडिएर नेपालमा पहिलोपटक आएकी फ्रान्जिस्कासँग प्रदेशपोर्टल डटकमले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । कुराकानीको शारांशः
के यो नेपालमा तपाइको पहिलो भ्रमण हो? कसरी नेपालसम्म आउनु भयो?
म सिनियर एक्स्पर्ट क्रप्स्मा सन २००९ बाट जोडिए । यहाँ जोडिएपछि मैले काम गरेको टुर गाइडको दुई दशक लामो अनुभव बाँड्न म पानामा सन २०१० मा पुगे । नेपालसँग भने किड्स ह्याप्पी होमको कारणले जोडिए ।
सिनियर एक्स्पर्ट क्रप्स्मा मैले टुर गाइड हुनु अगाडि प्राथमिक शिक्षिकाको काम पनि गरेकोले त्यो विधा पनि भरेको थिए । किड्स ह्याप्पी होमबाट मलाइ मार्चमा प्रस्ताव आयो । त्यो बेला आउन मिलेन र म सेप्टेम्बरमा आएको हुँ । यो मेरो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । दक्षिण एसियामा भने म यस अगाडि भारतको जयपुरमा पनि गएको थिए । त्यहाँ भने स्कुलको काम नभएर पर्यटनको काममा गएको थिए ।
स्विजरल्यान्डका र नेपालका किन्डर गार्डेनहरूमा के फरक छ ?
स्विजरल्यान्ढमा पढाइ भन्दा खेल धेरै हुन्छ । यहाँ पढाइ धेरै पढाइ र थोरै खेल हुन्छ । आफ्नो जिउले साथ नदिईकन २ वर्षको हुँदैबाट विद्यार्थीहरुलाइ किन्डर गार्डेनमा भर्ना गरिएको हुन्छ । यो चाहिँ फरक छ । बच्चाहरूलाई अङ्क देखी अक्षर सिकाइन्छ ।
नेपालमा अङ्ग्रेजी प्रणाली छ । हप्तामा चार दिन थ्योरी र एक दिन अभ्यास हुन्छ । स्विस एजुकेसन भने फरक हुन्छ । त्यहाँ चार दिन अभ्यास र एक दिन मात्रै थ्योरी हुन्छ । स्विसमा थ्योरी भन्दा अभ्यासमा ध्यान दिइन्छ । जस्तो फर्निचरको अध्ययन छ भने चार दिन अभ्यास र एक दिन मात्रै थ्योरी हुन्छ ।
नेपालको शिक्षामा के राम्रो लाग्यो?
मैले इटहरीको किड्स ह्याप्पी होममा हेरे । शिक्षकहरू धेरै दयालु र इमानदार लाग्यो । विद्यार्थीहरूमा पढ्ने उत्साह देखियो । मैले नानीहरूको मात्री भाषा नभएको अङ्ग्रेजीमा सिकाए । उनीहरूले बुझ्न चाहे । डिजिटल प्रविधिमा हुने पढाइ राम्रो लाग्यो । यसले बच्चाहरूलाई चाँडै सिकाउँछ ।
अन्तिममा के भन्न चाहनु हुन्छ?
बच्चाहरूलाई अधिकांश समय खेल्न दिनुपर्छ । विद्यालयमा घरमै खेलाउन सक्ने खेलहरू भन्दा खुल्ला मैदानमा खेलाउन सक्नुपर्छ । यो वा त्यो खेल भन्ने हैन स्वतन्त्र निश्चित क्षेत्रमा खेल्ने वातावरण दिनुपर्छ । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा खेल्न पाउनुपर्छ । किड्स ह्याप्पी होम स्कुल चाहिँ अत्यन्तै स्तरीय लेभलको लाग्यो । यो स्कुलको डिजिटल लाइब्रेरी, सुन्दर वातावरण, खेलमैदान र पूर्वाधार तारिफयोग्य छन् ।